Dagaal Xoogan oo Maanta Dhexmaray Ciidamada Dowlada oo kaashanaya Amisom iyo Al Shabaab (VIDEO) - Hablaha Media Network
Dagaal Xoogan oo Maanta Dhexmaray Ciidamada Dowlada oo kaashanaya Amisom iyo Al Shabaab (VIDEO)
HMN:- Ciidamada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa maanta waxay gobolka Hiiraan ka bilaabeen hawlgal balaaran oo la doonayo in dagaalyahanada Al Shabaab looga saaro deeganada ku dhow madaalada Baledweyne ee gobolka Hiiraan.
Hawlgalkaan oo ay iska kaashanayaan ciidamada Amisom iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed ayaa saaka waxa ciidanka ay ku dhaqaaqeen tuulooyinka kuyaal Galbeedka Magaalada Baledweyne.
Waxaa howlgalkani hor kacayo Taliyaha Guutada 10 ee ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed, qaybta Gobolka Hiiraan ka hawlgasha Col. Tawane Axmed Gurey iyo Taliyaha ciidamada Amisom ee Gobolka Hiiraan, Col. Xasan Jaamac.
Masuuliyiinta Maamulka magaalada Baledweyne oo uu horkacayo Guddoomiyaha Magaaladaasi Maxamed Cismaan Cabdi (Qalaafow) iyo Guddoomiye ku xigeenka dhanka arimaha Amniga iyo Siyaasada Maxamed Ibraahin C/laahi ayaa qayb ka ah howlgalka socda.
Ciidamada ayaa ku baxay deeganada kala ah Luuq Jeelow iyo Ceelbaar oo ay ku sugan yihiin Xubno ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Muddooyinkii danbe ayaa waxaa deegaanadaasi ka jiray dagaalo soo noq noqday oo dhaxmaray maleeshiyaad hubaysan oo deegaanka ah iyo dagaalkyahanno taabacsan ururka AlShabaab.